10 Toerana fitsorohana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Islandy > 10 Toerana fitsorohana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao
Any amin'ny halalin'ny ranomasina, miafina lavitra ny sivilizasiôna, ary tsy voakitikitiky ny fotoana, ny 10 tranonkala antsitrika tsara indrindra eto an-tany. Manomboka amin'ny haran-dranomasina mareva-doko sy mamirapiratra ka hatramin'ny vaky sambo WWII, fiainana an-dranomasina, sy lavaka manga, amboary ny fitaovanao antsitrika satria ity fitsidihana antsitrika ity dia efa ho tena mahafinaritra.
1. Toerana fitsorohana tsara indrindra any Shina: Ilay manda lehibe
10 mpizahatany an-tapitrisany mandeha any amin'ny Great Wall of China isan-taona, saingy vitsy dia vitsy no mahalala fa afaka mitsorika antsokosoko amin'ny iray amin'ireo tranonkala malaza indrindra eto an-tany izy ireo. Raha ny ankamaroan'ny olona mandeha amin'ny manda 21o00 km, sary fakana sary an-tserasera, Panjiakou Reservoir dia toerana fisitrihana anaty rano. Ny Great Wall of China no hany mahagaga an'izao tontolo izao, afaka milentika tokoa ianao.
Mety tsy dia mahaliana sy tsara tarehy toy ny filentika any Indonezia na Fidji, fa haverina tanteraka amin'ny fijerin'ny Great Wall of China ianao. Tsy mankafy ny manodidina fotsiny avy eo ambony, fa mahita azy hatramin'ny voalohany, manomboka amin'ny biriky sy miakatra, rafitra mijanona mandritra ny an'arivony taona maro, loza ateraky ny natiora velona, tarana-mpanjaka, sy ny fanovana politika.
Ny fotoana tsara indrindra hipetrahana:
Ny fitsorohana ny rindrina lehibe any Sina dia traikefa sarotra na dia ho an'ireo mpisitrika mandroso aza. Ny antony dia ny maripana ambany, mahatratra farafahakeliny 10 hatramin'ny 11 ° C, amin'ny 7 metatra ny halalin'ny fahavaratra. Ary noho izany, ny fotoana tsara indrindra hilentika ao amin'ny Great Wall dia rehefa miomana tsara ianao. Fepetra takiana fanampiny dia farafahakeliny nahavita ny 100 ny 200 mitsorika ho an'ny mpilomano fialamboly.
2. Toerana fitsorohana tsara indrindra any Angletera: Wales
Miaraka amin'ny lava-bato, 500 vaky, ary fiainana an-dranomasina mahafinaritra, ny morontsirak'i wales dia toerana mahavariana hisitrihana. Eto ianao dia afaka misitrika hatrany amin'ny 50m amin'ny ranon'i Skomer, ary Skokholm, sy nosy Middleholm. Ny fahitana dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny faritra, mamela anao hankafy ny fiainana an-dranomasina tsara tarehy sy hahita ny vakoka WWII raha tafiditra amin'ny tantara ianao.
Na eo aza ny fahitana torimaso ananany, Wales dia toerana fisitrihana mahafinaritra tokoa any Eropa. Ohatra, Skomer Marine Reserve any Pembrokeshire dia iray amin'ireo toerana fisitrihana tsara indrindra any Wales: poisson-chat, feso, ranomasina sy ranomasina, vitsivitsy amin'ireo zavaboary an-dranomasina hihaona aminao fotsiny ianao.
miaraka 20 teboka misitrika isan-karazany, Portofino dia mihoatra ny a tanàna amoron-tsiraka mahafinaritra any Eropa. Ho fanampin'ny trano tanàna mahafinaritra, trano fisakafoanana, sy ny tora-pasika, ny morontsirak'i Ligurian dia toerana fisitrihana mahafinaritra any Eropa.
Voalohany, ny Portofino Marine Reserve dia manolotra haran-dranomasina sy sambo fahagagana mahatalanjona ho an'ny mpisitrika vao manomboka sy mandroso. Faharoa, ny sarivongan'i Kristy, Christ of the Abyss dia iray amin'ireo tampony 5 tranokala antsitrika any Portofino. Last, fa tsy ny kely indrindra, ny vaky serfa MOHAWK kanadianina iray hafa manintona antsitrika ao 20-40 metatra.
Hamaranana, Ireo tranonkala antsitrika ao Portofino dia mety amin'ny fisitrikao voalohany, ary hahita fahagagana hafa fahagagana voajanahary raha mpisitrika za-draharaha ianao.
Milan mankany Portofino miaraka amina lamasinina
Venise mankany Portofino miaraka amina lamasinina
Florence mankany Portofino miaraka amina lamasinina
Turin mankany Portofino miaraka amina lamasinina
4. Toerana fitsorohana tsara indrindra any Frantsa: Nosy Guadeloupe frantsay
Ao amin'ny paradisa Karaiba, ny nosy la Guadaloupe dia ampahany kely amin'ny lanitra antsitrika frantsay. Ity vondrona nosy kely ity dia misy an'i La Grande Terre, ary Petite Terre, tranon'ny volkano, ala mando, tontolo mahafinaritra sy morontsiraka, ary ny tena zava-dehibe dia iray amin'ireo toerana fisitrihana tsara indrindra any Eropa.
Ny nosy Guadeloupe dia tsy dia malaza toa an'i Bali na i Belize, fa ny fiainana an-dranomasina eto kosa dia hitazona anao anaty rano mandritra ny fialan-tsasatrao manontolo. Cousteau Marine Reserve no toerana fanaovana antsitrika tsara indrindra any Guadeloupe, miaraka amin'ny biby sy zavamaniry mahafinaritra, tonelina, zohy fano, ary toerana maro hafa miafina ho an'ny mpisitrika mpitsangatsangana, ary ho an'ireo voalohany izay te hankafy ny fiainana an-dranomasina any amin'ny rano Karaiba fotsiny.
Fotoana tsara indrindra hipetrahana any amin'ireo nosy Guadeloupe:
Ny mari-pana amin'ny rano dia mijanona 23-28 ° C mandritra ny taona mandavantaona any Guadeloupe, mba hahafahanao tonga mitsoraka isaky ny irinao.
5. Nosy Orkney, Scotland
Any an'ala maitso, HAVOANA, ary ny tendrombohitra, ny Nosy Orkney no manana ny tantaram-pitaterana an-dranomasina tsara indrindra eto an-tany. ara-bakiteny, misy 7 sambo eo am-pototry ny rano Orkney any Ekosy. Ireto sambo-dranomasina ireto dia avy amin'ny fiaramanidina avo any Alemana amin'ny Scapa Flow, in 1919.
Ho fanampin'ireo rava, misy biby dia an-dranomasina mahatalanjona azo zahana ao anaty rano madio. Ohatra, ny ranon'ny Churchill Barriers sy ny Yesnaby na Inganess dia mety amin'ny fahitana ny fiainana an-dranomasina.
Ny fotoana tsara indrindra hipetrahana any amin'ireo nosy Orkney:
Paka ka hatramin'ny Novambra, rehefa 13 ° C ny mari-pana.
6. Toerana fitsorohana tsara indrindra any Eropa: Silfra, Islandy
Anelanelan'ny kaontinanta roa, ao am-pon'ny Thingvellir National Park, ny rano madio indrindra any Islandy no miandry anao amin'ny traikefa an-tsitrika mahatalanjona. Ireo fiasa ara-jeolojika tsy manam-paharoa ao Silfra dia manome tionelina sy zohy miafina ho an'ny mpitsinjara efa za-draharaha.
Ny zavatra manaitaitra indrindra amin'ny fisitrihana ao Silfra dia ny fisaratanana. Ity làlana fisitrika ity dia noforonin'ny isan-taona 2 cm hetsika ny takelaka tektonika amerikana avaratra sy Eurasia. Ity dia noforonina voalohany taorian'ny horohoron-tany, saingy azo antoka tanteraka amin'ny filentehany amin'izao fotoana izao, amin'izay ianao afaka manomboka miomana amin'ny traikefa antsitrika tsy hay hadinoina any amin'ny rano Islandy.
Ny halalin'ny antsitrika farany azo avela ao Silfra dia 18 metatra.
7. Toerana fitsorohana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: Bali
Morontsiraka fasika manodidina, tempoly, tendrombohitra volkano, ny ranon'i Bali mahagaga dia mahagaga an'izao tontolo izao irery. Azo antoka fa, Bali dia toerana mahafinaritra ho an'ny fialan-tsasatra ary tonga lafatra amin'ny fisitrika.
Any Bali, azonao atao ny mizara ny fotoananao amin'ireo toerana antsitrika maro satria aiza no misy azy ireo. Manomboka amin'ny haran-dranomasina maroloko ka hatramin'ny trondro goavambe, ary lava-bato ho an'ny sarivongana Buddha mitsoka saina, Bali ambanin'ny rano dia tontolo mampientanentana sy mahavariana amin'ny fisitrihana sy nilomano.
Ny fotoana tsara indrindra hitsorohana any Bali:
Ny volana Mey ka hatramin'ny Novambra no fotoam-pisitrihana any Bali, ary ny fotoana mety indrindra hijerena an'i Manta Rays dia ny volana aprily ka hatramin'ny mey.
8. Toerana fitsorohana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: Ny lavaka manga ao Belize
125 metatra lalina, endrika boribory, ary miaraka amin'ny fahitana an'habakabaka mahatalanjona, ny toerana fisitrihana Lavaka Manga ao Belize, dia iray amin'ireo ambony 10 tsy maintsy misitrika tranonkala eto amin'izao tontolo izao. Io lavaka goavambe io dia avy hatrany amin'ny Lighthouse Reef any Belize, ary amin'ny fahitana tsara, mety hahita ny tenanao anaty traikefa antsitrika tsy hay hadinoina ianao.
Tsy toy ireo tranonkala antsitrika tsara indrindra ao amin'ny lisitray, ny Hole Blue dia tsy trano fonenan'ireo sary sokitra Bali, fiainana an-dranomasina tsy fahita firy, na haran-dranomasina maroloko. Ny zavatra hitanao dia traikefa an-antsitrapo manaitra sy mahafa-po, hitondra anao any amin'ny ambaratonga divemaster manaraka ity.
Ny fotoana tsara indrindra hisitrihana ao amin'ny lava-manga:
Ny aprily ka hatramin'ny jona no tsara indrindra hijeren'ny antsantsa trozona sy antsitrika.
9. Raja Ampat |: Diving amin'ny faran'izao tontolo izao
Mijanona hiala amin'ny sivilizasiôna hatramin'ny 2004, Raja Ampat dia paradisa miafina, hita eo anelanelan'i Indonezia sy Aostralia. Misaotra an'ity nahitana tara ity, ny bibidia an-dranomasina ao Raja Ampat dia iray amin'ireo wildest eto amin'izao tontolo izao.
Rehefa milentika ao Raja Ampat ianao, ho hitanao izany 600 karazana haran-dranomasina mafy fotsiny, ankoatry ny fiainana an-dranomasina maroloko sy ivelan'ity tontolo ity. Ity tontolo tsy manam-paharoa ity dia eo afovoan'ny 4 nosy lehibe: Waigei, Batanta, Salawati, ary Misool any amin'ny faritra lavitra andrefan'i Papua.
Raha mpanelanelana amin'ilay mpisitrika mandroso ianao, avy eo dia tokony hamandrika ny fialan-tsasatra antsitrikao manaraka any Raja Ampat ianao.
Ny fotoana tsara indrindra hisitrihana ao Raje Ampat:
Novambra ka hatramin'ny aprily miaraka amin'ny mari-pana manomboka amin'ny 27 ny 30 ° C.
10. Toerana fitsorohana tsara indrindra any Shina: Shi Cheng tanàna taloha ao amin'ny farihy Qiandao
Lalina amin'ny farihy Nosy arivo, any amin'ny faritanin'i Zhejiang, ny tanàna taloha lainga an'i Shi Cheng. Amin'ny halalin'ny 40 metatra, ho hitanao ny fahagagana amin'ny tanàna sinoa very. Na eo aza ny rano masiaka ary lasa ny fotoana, ny endrika mampiavaka ny tanàna, ary na ny antsipiriany hazo aza voatahiry tsara.
Noho ireo antony ireo, ny tanànan'i Shi Cheng dia paradisa miafina ho an'ny mpanao antsitrika. Betsaka no tonga mahita ny hakanton'ny Farihy Qiandao, fa ity tanàna very ity dia antony iray hafa mahagagaga lavitra. Tondraky ny rano ny tanàna sy ny lohasaha 1959, saingy azo antoka tanteraka raha milentika.
Fotoana tsara indrindra hipetrahana any Shi Cheng:
Lavo, misaotra ny toetr'andro maina sy mafana.
eto amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy anao amin'ny famolavolana fitsangatsanganana tsy hay hadinoina any amin'ny 10 tranokala filomanosana tsara indrindra eran-tany amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay hoe "1o Toerana fitsorohana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao" ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fbest-diving-sites-world%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)